China nyore Peel Aluminium Foil Induction Seal Liner fekitari uye bhizimisi | 品牌 名 / 公司 名
Izvo zvinorehwa uye basa rekuisa chisimbiso kumhara yekuisa chisimbiso, inowanzozivikanwa sechivharo chekuvhara, inoreva chivharo uye lining zvinhu izvo zvinogona kuburitsa yakasimba yekuvhara mhedzisiro nemudziyo. Pano, midziyo inoreva mabhodhoro egirazi, mabhodhoro epurasitiki uye magaba esimbi. Kune mhando dzakasiyana dzemabutiro, anosanganisira sikuruu ngowani, zvekudhonza mabutiro, cap ngowani, crimping nguwani, kumanikidza ngowani. Lining zvinhu zvinongedzera kune izvo zvinhu zvinogona kuvhara muvharo nemudziyo zvakanyatsosimba, Zvishandiso zvine zvimwe zvinodiwa uye maratidziro hazvina zvachose kuburitswa. Kuona mashandiro anoita zvinhu zvakapakurwa zvinoramba zvisina kuchinjika, semuenzaniso, kana iyo kavha ichishandiswa chete uye pasina lining pazasi pechifukidziro, iyo yekuisa mucherechedzo inonetsa kuwana. Basa re lining rakakura
Raw zvinhu: Aluminum foil, firimu, adhesives, ingi, solvent, nezvimwewo.
Simbiso rukoko: PS, PP, PET, kana Pe
Hurefu Ukobvu: 0.24-0.38mm
Dhayamita Yakadzika: 9mm - 182mm
Kunyanya yakachena kurongedza.
Aluminium mapepa emabhodhi emapakeji akasiyana, PET / HDPE / PP / PS / PVC mabhodhoro nemabhodhoro egirazi.
Kupisa Kunopisa Zvisimbiso zvine kugona kwakadzikama kwekuvhara midziyo yakawanda
1. Zvisimbiso muutsva
2. Dzivirira kubuda kunodhura
3. Deredza njodzi yekukanganisa, huswa, uye kusvibiswa
4. Wedzera hupenyu hwesherufu
5. Gadzira zvisimbiso zvehemmetic
6. Zvakatipoteredza zvine hushamwari
Pashure: Simudza 'N' Peel
Zvadaro: Chimwe-chidimbu Kupisa Induction Seal Liner ine Kutsigira